Asan-jiolahy mahery vaika :: Indray nindaosin’ny fahafatesana ireto mpianaka voatifitra • AoRaha
Asan-jiolahy mahery vaika Indray nindaosin’ny fahafatesana ireto mpianaka voatifitra
Maty tsy tra-drano ny renim-pianakaviana iray sy ny zanany, folo taona, noho ny hetraketraky ny dahalo nanafika tany Kelivaho Betroka, ny harivarivan’ny zoma 8 marsa lasa teo. Voalaza fa samy voatifitra izy mianaka ireo. Olona iray hafa no narara mafy vokatry ny vono nahazo azy.
Tsy mbola fantatra na mety ho misy antony manokana ny fanafihana narahina vono olona tao amin’ity tokantrano iray tany Kelivaho ity. Am-polony maro ireo mpanafika. Voalaza fa nisy ny nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika. Afaka nandositra ny raim-pianakaviana tompon-trano. Tratran’ ireo jiolahy tao ny vady aman-janany izay notifiriny avy hatrany. Voaroba ny omby miisa fito amby roapolo tao am-bala.
Naheno ny antso vonjy ny mpitandro filaminana, any Betroka. Niaraka nanao rodobe nanenjika an’ireo malaso ny zandary sy ny fokonolona. Niafara tamin’ny fifandonana izany. Nisy naratra voatifitra ireo dahalo saingy mbola afaka nandositra niaraka tamin’ny namany. Iray hafa lavo. Tafaverina kosa ny omby halatra rehetra.
Fikasihan-tanana any an-tsekoly Hiakatra Fitsarana ilay mpampianatra nandratra ankizy
Fanadiovana toeram-pitsabona :: Miofana amin’ny fitantanana ny fako ny eny anivon’ny hôpitaly